अस्पतालको शौचालयमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु » बुद्ध भूमि नेपाल
Home/कोरोना अपडेट/अस्पतालको शौचालयमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु
अस्पतालको शौचालयमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु
४ मंसिर, बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमाका एक जना कोरोना संक्रमितको भैरहवास्थित भीम अस्पतालको शौचालयभित्र मृत्यु भएको खुलेको छ । कोरोना संक्रमणपछि चार दिनसम्म होम आइसोलेसनमा बसेका तिलोत्तमा नगरपालिका नयाँमिलका ५८ वर्षका पुरुषको शौच गर्न गएका बेला शौचालिय भित्रै अक्सिजन अभावमा मृत्यु भएको हो ।
कात्तिक २६ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनी श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि २९ गते भिम अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएका थिए । उनको कात्तिक ३० गते विहान मृत्यु भएको थियो । संक्रमितलाई भर्ना भएकै राति प्लाज्मा थेरापी र रेम्डिसिभिर समेत चलाइएको थियो ।
उनलाई आईसीयूूमा सार्ने तयारी समेत भएको थियो । मृतकका आफन्तले मृत्यु भएको चार दिनपछि अस्पतालको लापरवाहीले विरामीको ज्यान गएको आरोप लगाएका छन् । अस्पतालका चिकित्सक डा. आरिस हुसेनले भने लापरवाही नभएको दावी गरे । ढोका लगाएर शौच गर्दा अक्सिजनको मात्रा कम भएर विरामीको ज्यान गएको डा. हुसेनले बताए ।
अस्पतालमा रातिमा ड्युटी गर्ने नर्सको अभाव भने रहेको उनले बताए । संक्रमित विरामीले बिहान ३ बजेसम्म परिवारका सदस्यसंंग फेसबुक म्यासेन्जरमा कुरा गर्दै आफ्नो स्वास्थ्य ठिकै रहेको बताएका तर बिहान ७ बजेतिर अस्पतालले बिरामीको मृत्यु भएको जानकारी गराएको मृतकका आफन्त अर्जुन पौडेलले बताए ।
मृतकका आफन्तले संक्रमित बिरामी शौचालयमा झण्डै दुई घण्टा समय बस्दा पनि अस्पतालले थाहा नपाउनु गम्भीर लापरवाही भएको आरोप लगाएका छन् । उनले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । तर अस्पतालका डाक्टरले भने बढीमा २० मिनेट शौचालयमा रहेको दावी गरे । Source:onlinekhabar
दुखद खबर : कोरोना संक्रमण बाट सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टरको मृ’त्यु
९ मंसिर २०७७, मंगलवार ०९:४७
कोरोना विरुद्धको चिनियाँ खोप : परीक्षणमा सफल देखिएको चीनको दाबी
४ मंसिर २०७७, बिहीबार ०९:०७
कोरोनाका कारण नेपालमा दुई वरिष्ठ चिकित्सकको निधन
२ मंसिर २०७७, मंगलवार १०:२२
१ मंसिर २०७७, सोमबार १८:३१
कलाकार मनोज गजुरेल कोरोना संक्रमण मुक्त भए
३० कार्तिक २०७७, आईतवार ०९:२९
२८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार २०:१७